परीक्षा तयारीः के हो कर्जा जोखिम, कसरी गर्छन् बैंकले समाधान ? - Everest Dainik - News from Nepal
परीक्षा तयारीः के हो कर्जा जोखिम, कसरी गर्छन् बैंकले समाधान ?
मृगेन्द्र नाथ रिमाल । साधारणतयाः जोखिम जीवनको हरेक पक्ष एवम् वित्तीय क्षेत्रमा खास रुपमा अन्तरनिहित हुन्छ । जोखि कुनै पनि व्यवसायमा हुने अनिश्चितता साथै वित्तीय व्यवहारलाई हाँकने मुलभूत तत्व पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । जोखिम सर्वव्यापी छ, त्यसकारण कुनै पनि बैंकहरु जोखिमबाट स्वतन्त्र छैनन् भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ व्यवसायको भविष्य निसंदेह जोखिम व्यवस्थापनको गतिशीलतामा निर्भर गर्छ । जोखिम(risk) ल्याटिन शब्द rescum अर्थात सामुद्रिक जोखिमबाट आएको उल्लेख भएको पाइन्छ । बैंकहरुले भोगिराखेका जोखिमहरु उचित ढंगबाट सामना गरिएको, प्रभावपूर्ण तरिकाले नियन्त्रण भएको तथा राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको बुझ्नु ज्यादै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । बैंकद्धारा संचालित हरेक कारोबारहरुले त्यस बैंकको जोखिममा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस नयाँ माैद्रिक नीतिका केही मुख्य बुँदाहरु के छन ?
ट्याग्स: Bank Exam, Loan Risk